Alnico Magnet Material, China Alnico Magnet Material Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Alnico Magnet Chinyorwa
Alnico zvishandiso (zvakanyorwa zvakanyanya zvealuminium, nickel, uye cobalt ine zvidiki zvidiki zvezvimwe zvinhu zvinosanganisira titanium nemhangura) bvumidza dhizaini dhizaini inopa yakakwira ratidziro, simba rakakwira uye zvine hunyanzvi hwekumanikidza. Magneti eAlnico anozivikanwa neakanakisa tembiricha kudzikama uye yakanaka kuramba demagnetization kubva kune vibration uye kuvhunduka. Magneti eAlnico anopa akanakisa tembiricha hunhu hwechero zviyero zvemagineti zvigadzirwa zviripo. Inogona kushandiswa kuenderera mberi nebasa kunyorera uko tembiricha yakanyanyisa kusvika pa930F inogona kutarisirwa.
Magneti eAlnico anogadzirwa kuburikidza nekukanda kana sintering maitiro. Alnico magineti yakaoma kwazvo uye inopwanya. Kugadzira kana kuchera hakugone kuzadzikiswa nenzira dzakajairika. Makomba anowanzo coredwa mune iyo foundry. Magineti anokandwa kana sintered zvakanyanya sezvinobvira kune inodiwa saizi kuitira kuti hasha kukuya kupedzisa hupamhi uye kushivirira kunoderedzwa
Unyanzvi hwekukanda hunyanzvi hunoshandiswa kuwana yakasarudzika kristalline tsananguro yezviyo inowanikwa mune alnico 5 uye 8 mamaki. Aya anisotropic mamaki akagadzirirwa kuburitsa yakakwira magineti kuburitsa munzira yakatarwa. Kudzidziswa kunoitwa panguva yekurapa kwekupisa, nekutonhodza kukanda kubva 2000F pachiyero chakadzorwa mukati memagineti inoenderana neinodiwa nzira yemagineti. Alnico 5 uye Alnico 8 vane anisotropic uye vanoratidzira nzira inosarudzika yekutenderera, Magnetic maitiro anofanirwa kutsanangurwa pamufananidzo wako paunotumira odha kwatiri.
Cast Alnico 5 ndiyo inonyanyo shandiswa pane ese cast Alnico's .Iyo inosanganisa zvakakwirisa zvine simba rakakura chigadzirwa cheM5 MGOe kana zvimwe uye inoshandiswa zvakanyanya mukutenderera michina, kutaurirana, metres uye zviridzwa, kuona michina uye kubata zvishandiso. Iyo yepamusoro kurwisa demagnetization (yekumanikidza simba) yeAlnico 8, cobalt zvemukati kusvika 35%, inobvumira zvinhu izvi kuti zvishande zvakanaka kwehurefu hupfupi kana kureba kusvika kuhupamhi ratios isingasviki 2 kusvika 1.
Sintered Alnico zvishandiso zvinopa zvishoma zvakaderera magineti zvivakwa asi bhutsu zvemakanika hunhu kupfuura izvo zvakakandwa Alnico zvigadzirwa Sintered Alnico magineti anonyanya kukodzera mumadiki madiki (asingasviki 1 oz.) Mune ino maitiro. Musanganiswa unodikanwa wesimbi yeupfu unodzvanywa kuti ugadzire uye kukura mufa, wozonyungudutswa pa2300 F mune hydrogen mhepo. Iyo yekumhanyisa sisitimu yakanyatso kukodzera kune hombe vhoriyamu kugadzirwa, uye zvinoguma muzvikamu izvo zvine hunhu zvine hunhu hwakasimba kupfuura cast magineti. Zvichienderana kushivirira kushivirira kunogona kuwanikwa pasina kukuya.
Hunhu hweAlnico Magnet:
* Shanduko diki mumagineti zvimiro kune tembiricha mhedzisiro
* Kunonyanyisa kushanda tembiricha inogona kunge yakakwira se450oC ~ 550oC.
* Simba rekumanikidza rakaderera.
* Yakasimba ngura kuramba kugona, hapana kupfeka kunodiwa pamusoro pekudzivirira.
• Inokodzera madhayeti madiki evhoriyamu ane chimiro chakaomarara
• Compact crystal, yakasimba
• Yakajairwa chimiro, chaiyo saizi
• Kunyange zvinhu, kugadzikana kuita
• Inokodzera magineti emubatanidzwa
• Kunaka kwekushisa tembiricha (temp. Coefficient yeBr ndiyo idiki pakati pemamwe magineti anogara aripo
Magnetic uye Panyama Zvivakwa zveCast Alnico Magnet
giredha Yakaenzana MMPA Kirasi Kusununguka Kumanikidza Simba Kunonyanyisa Energy Chigadzirwa Density Inodzosera Temp. Coefficient Inodzosera Temp. Coefficient Curie Temp. Temp. Coefficient taura pfungwa
Br Hcb (BH) max g / cm3 α （） α （Hcj） TC TW
Magnetic uye Panyama Zvivakwa zveSintered Alnico Magnet
mamakisi Yakaenzana MMPA Kirasi Kusununguka Kumanikidza Simba Kumanikidza Simba Kunonyanyisa Energy Chigadzirwa Density Inodzosera Temp. Coefficient Curie Temp. Temp. Coefficient taura pfungwa
Br Hcj Hcb (BH) max g / cm3 α （） TC TW